Ikilabhu ithi bekufanele imbophise umqeqeshi | isiZulu
Ikilabhu ithi bekufanele imbophise umqeqeshi
Ubonge bonke abamfakela ingcindezi uKomphela, 'evalelisa'
OwePirates uncoma indlela abadlale ngayo nakuba behlulekile ukuwina
'IChiefs ingaqasha noma yimuphi umqeqeshi kodwa ngeke ubekhona umehluko'
Johannesburg - Imenenja yeBlack Leopards uTshifiwa 'Chief' Thidiela ithi bekuyilungelo labo ukuvulela icala lowo owayengumqeqeshi wale kilabhu u-Ivan Minnaert ngezinsolo zokuthi uyenqaba ukubuyisa okhiye bemoto bekilabhu.
Lo mqeqeshi waseBelgium washiya le kilabhu yaseLimpopo ngoDisemba wangonyaka owedlule, ngemuva kokuba umqeqeshi esole imenenja yeLidoda Duvha u-Elijah Mulaudzi ngokuthi yamshaya, nokwaholela ekuvulweni kwecala lokuzama ukubulala.
UMinnaert, nokho, useboshiwe ngemuva kokwenqaba ukubuyisa okhiye bemoto yekilabhu, ngokusho kwekilabhu.
Ngokusho kwesitatimendeni esitholwe yiKickOff.com siphuma kummeli kaMinnaert u-Arthur Dlamini we-MFJassa TD Dlamini Incorporated, uMinnaert uboshwe ngamaphoyisa asePolokwane eseGoli ngo-Ephreli 10, ngabo-15:45.
OLUNYE UDABA: AmaZulu asayine isivumelwano nabaxhasi abasha
Usolwa ngokweba okhiye beNissan Almera, ayeyisebenzisa esaqashwe yiLidoda Duvha.
Uthi ukuboshwa kukaMinnaert kuhloswe ngakho ukumesabisa ukuze ezohoxisa icala alifake kwiDispute Resolution Chamber ye-PSL ngodaba lwenkontileka yakhe.
Isitatimende sithi lomqeqeshi uyiswe esitokisini ngemuva kwamahora amathathu behamba ngemoto.
Umnikazi weBlack Leopards uDavid Thidiela uthi bazame konke ukuncenga uMinnaert ukuba abuyise izinto zekilabhu kodwa wangafuna.
Uphinde wakuphika ukuthi lena yimizamo yokuba kuhoxiswe necala.
AmaZulu asayine isivumelwano nabaxhasi
AmaZulu asesayine isivumelwano nenkampani ekhiqiza izimpahla zezemidlalo, i-Umbro.
"Njengoba sengihamba, kumele ngibonge wonke umuntu,” lawa ngamazwi ashiwo umqeqeshi weKaizer Chiefs uSteve Komphela ngemuva kwehlula iPlatinum Stars.
UZwane ubonge abalandeli behlula iWits
Umdlali wasesiwini weMamelodi Sundowns uThemba Zwane ubonga abalandeli ngemuva kokuwina bedlala neBidvest Wits.
Fourways - 06:48:52 AM TRAFFIC LIGHTS not working at Cedar Road - POINTSMEN ON DUTY Ezinye zasemigwaqeni